Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si iPhone (iPhone 6s Plus gụnyere)
Mmadụ na mberede ehichapụ foto gị iPhone, ma na-achọ iji nweta ha azụ ịnụ ọkụ n'obi na? Ọ bụghị a nnukwu ihe ugbu a. Na a n'ụzọ ziri ezi, ị ka nwere ike weghachite ha na mbụ mma. Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows & Mac) na-ahapụ gị naghachi ehichapụ foto site na iPhone na 3 ụzọ: kpọmkwem naputa site na iPhone, ịgbake iTunes ndabere faịlụ na-agbake si iCloud ndabere faịlụ. Ego zuru ezu ngwọta n'okpuru.
Ihe ndị dị mkpa ị kwesịrị ịma:
1. N'ihi na ndị mmadụ onye iPhone rapaara na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ ma ọ bụ mgbake mode mgbe upgrading iPhone ka iOS 9, ị na-adịghị mkpa naghachi foto site na iPhone ugbu a! Niile ị chọrọ bụ ka ego otú ndozi iPhone na-acha ọcha na ihuenyo ọnwụ ma ọ bụ esi iPhone si mgbake mode. N'ihi na n'aka, mgbe na-amụta ụzọ, gị iPhone ga-ghọọ nkịtị mode.
2. Ọ bụrụ na ị kwụsịrị foto gị iPhone 6s, iPhone 6s Plus ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iPhone na-agba ọsọ iOS 9, ị kwesịrị ị na enweta Photos ngwa na-aga na-adịbeghị anya ehichapụ nchekwa iji lelee ma ndị a furu efu foto ndị e ma ọ bụ. Ọ bụrụ na ha na-ahụ, ị ​​nwere ike iweghachi ha ozugbo. Ọ bụrụ na e nwere n'ebe ahụ, ị ​​kwesịrị ị na-eso ụzọ n'okpuru naghachi photos.
Olee otú anyị pụrụ jikwaa naghachi ehichapụ foto site na iPhone na 3 Ụzọ
iPhone (iOS 9 akwado) Photo Recovery
Na-enye gị ụzọ atọ iji weghachite ehichapụ foto site na iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Weghachite photos kpọmkwem site iPhone, iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud ndabere.
Naghachi ehichapụ foto site na Igwefoto Roll, Photo Library na Photo Stream.
Preview na selectively naghachi foto na mbụ mma.
Na-akwado iPhone 6s, iPhone 6s Plus na ọhụrụ iOS 9
Cheta na: N'ihi na photos furu efu na iPhone 4S na n'elu, biko gbalịa naghachi ha si iTunes ndabere faịlụ ma ọ bụ iCloud ndabere faịlụ.
3 Solutions iji weghachite ehichapụ Photos si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5s / 5c / 4s / 4 / 3GS
1: Naghachi ehichapụ foto site ịgụ isiokwu gị iPhone
2: Naghachi ehichapụ foto site adịrị iTunes ndabere
3: Naghachi ehichapụ foto site na nbudata na adịrị iCloud ndabere
Part 1: Naghachi ehichapụ foto site ịgụ isiokwu gị iPhone
Mgbe na stalling usoro ihe omume na kọmputa gị, na-agba ya. Mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa. Mgbe ihe omume ahụ achọpụta rụọ gị iPhone, soro kọwaa ya na window ka "Malite iṅomi" ịgụ isiokwu gị iPhone.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake foto gị iPhone
Mgbe iṅomi akwụsị, ị nwere ike ịhụchalụ na ego niile data dị ka agbake n'ime Doppler N'ihi. Naghachi photos, ị nwere ike ihuchalu ọ bụla ihe na edemede nke Igwefoto Roll, Photo Stream na App Photos. Ịhụchalụ ha otu otu, na nne Mmetụta ihe ị chọrọ. Wee pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Part 2: Naghachi ehichapụ foto site adịrị iTunes ndabere
Nzọụkwụ 1 Họrọ na wepụ iTunes ndabere
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, ịgbanwee gaa na naghachi n'aka iTunes ndabere File site na ịpị nhọrọ na n'elu nke window. Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-chọpụta niile iTunes ndabere faịlụ ẹdude na kọmputa gị na-ewetara ha niile n'ihi na gị nhọrọ.
Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa na Malite iṅomi button na-amalite adịrị nkwado ndabere na mpaghara. The adịrị usoro ga-ewe gị banyere 5 sekọnd.
Nzọụkwụ 2 Preview na-agbake gị iPhone photos
Na Doppler N'ihi n'ihu site Wondershare Dr.Fone maka iOS, ị nwere ike ịlele niile recoverable data otu otu na zuru ezu, dị ka photos, kọntaktị, ozi, ndetu, na-akpọ abanye na ndị ọzọ. Dị nnọọ nne Mmetụta ọ bụla ị chọrọ n'oge preview. Mgbe ahụ na-azọpụta ha na kọmputa gị na naanị otu òké click na Naghachi bọtịnụ.
Nkebi nke 3: Naghachi iPhone foto site na iCloud ndabere
Nzọụkwụ 1 Download na wepụ iCloud ndabere faịlụ
Họrọ mgbake mode nke naputa site na iCloud ndabere File, na mgbe ahụ ị nwere ike tinye gị Apple ID na paswọọdụ iji abanye na. Mgbe ahụ, omume nwere ike na-akpaghị aka ịhụ niile ndabere faịlụ ẹdude gị iCloud akaụntụ. Họrọ onye ị chọrọ iji naghachi iPhone foto site na iji download ma wepụ ya. Ọ ga-ewe gị oge ụfọdụ. Nnọọ echere na na-na internet ejikọrọ.
Ozugbo Doppler zuru ezu, ị nwere ike ịnweta na ịhụchalụ ọdịnaya gị iCloud ndabere na zuru ezu. N'ihi na photos, ị nwere ike ịlele Igwefoto Roll na App Photos. Ịhụchalụ ha otu otu na nne Mmetụta ihe ị chọrọ. Wee pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị.
niile iPads gụnyere iPad Pro, iPad Air, iPad Obere na Retina ngosi, iPad Obere, iPad na Retina ngosi, The ọhụrụ iPad, iPad 2, iPad 1
Ọzọ Isiokwu na-dozie iPhone Nsogbu i nwere ike
Olee otú Iweghachite iMessage si iPhone
Naghachi Lost Photos si iOS 9 Devices
> Resource> iPhone> Olee naghachi ehichapụ Photos si iPhone